Wasiirka arrimaha dibedda Qatar oo tegay Muqdisho
Wasiirka arrimaha dibedda Qatar iyo ra'iisul wasaare Kheyre
Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ahna Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho.
Wafdigan oo uu ka mid ahaa wasiirka gaadiidka, isgaarsiinta iyo dekada dawladda Qatar, Jassim Bin Saif Ahmed Al Sulaiti ayaa la kulmay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, iyo wasiiro iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka.
Kulan ay yeeshee Xasan Cali Khayre iyo Al Thani ayaa looga hadlay adkeynta xiriirka labada dowladood iyo dardar gelinta mashaariicda ay Qatar ka fuliso Soomaaliya, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska Kheyre.
Kadib kulanka ayaa wasiirka dekedaha Soomaaliya Maryam Aweys Jaamac, iyo wasiirka isgaarsiinta iyo dekada dawladda Qatar Jassim Bin Saif Ahmed Al Sulaiti waxay si wadajir ah u shaaciyeen la billaabayo dhismaha dekadda Hobyo ee goblaka Mudug.
Jassim Bin Saif Ahmed Al Sulaiti ayaa ballan-qaaday in dekadda Hobyo loo dhisayo habka ugu casrisan ee dekad loo dhiso, laga billaabo maantana laga howl gelayo qorshaha dhismaheeda, si shacabka Soomaaliyeed ay uga faa’iideystaan.
Wasiirka dekadaha Soomaaliya, Marwo Maryam Aweys Jaamac ayaa iyana sheegtay in billaabidda dhismaha dekadda Hobyo ay muhiim u tahay shaqo abuurka dhallinyarada Soomaaliyeed iyo horumairnta dhaqaalaha dalka.